Dibadda - Jiangxi Prototek Imp&Exp Co., Ltd.
Prototek waxaanu aaminsanahay in ay yihiin waxyaalaha yaryar ee wax ka bedela nolosheena Waa waxyaalaha yaryar ee go'aamiya dhimashada iyo nolosha. Jacaylkayaga, khibradayada, iyo daryeelkayaga faahfaahin kasta oo yar, laga bilaabo Usha fuulista, Platform iyo Biraha Hardware/Gear. Sii qaybaha tayada ugu fiican ee qalabkaaga dibadda.
Qiimaha khadka tooska ah, ku hel qiimahaaga 24 saacadood!
Prototek wuxuu la shaqeeyaa soosaarayaasha qalabka dibadda, shirkadaha qaybaha baaskiillada. Alaabta dibadda iyo shirkadaha qalabku waxay ku xiran yihiin awoodahayada wax-soo-saarka sida hababka farsamaynta ee CNC-ga sare leh, iyo foorjarin heersare ah oo loogu talagalay soosaarka naqshadaynta alaabta.
SOO rar qayb
Codsiyada Dibadda ee Caadiga ah
Dhammaan alaabadayada aluminium ee mashiinka lagu farsameeyay ayaa si sharaf leh loogu sameeyay halkan Shiinaha! Qalabka bannaanka ee Prototek ayaa si joogto ah u sii deynaya badeecooyin cusub waxaanan ka ahayn alaab-qeybiye:
Qaybaha Usha fuula
Warshadaha isticmaala CNC
Alaabta Cnc, Qaybaha Cnc ee Iibka, Cnc Soo Saaraha Qaybaha Rogsaday, Qaybaha Saxda ah ee Cnc, Qaybaha Spindle-ka, Adeegga Cnc ee jaban,